Antelomita : tohodrano mamatsy herinaratra efa ho 100 taona | NewsMada
Antelomita : tohodrano mamatsy herinaratra efa ho 100 taona
Nitsidika ny toby famokarana herinaratra any Antelomita ny tale jeneralin’ny Jirama, Jaomiary Olivier Aimé sy ny mpiara-miasa aminy, omaly.
Fotodrafitrasa avy amin’ny tohodrano hanodinana herinaratra ny any Antelomita, kaominina Anjeva, distrika Manjakandriana. Mamatsy ny tambajotra Antananarivo sy ny manodidina (RIA), manampy ny any Andekaleka. Ity ny fotodrafitrasa mamokatra herinaratra anisan’ny ela indrindra eto Madagasikara, naorina ny taona 1906, ary nihodina ny taona 1908, izany hoe ho feno 100 taona amin’ny taona 2018. Mampiavaka azy, mamokatra herinaratra sady mamatsy ny ao Mandroseza miantoka ny rano fisotron’Antananarivo.
Ho vita amin’ny novambra Antelomita II
Ahitana toby roa any an-toerana, mitotaly 8,2 Mw. Misy gropy efatra ny Antelomita I, manana tanjaka 1.500 kw ny telo (4500 kw) ary 680 kw ny fahefatra, saingy misy fahasimbana ary eo am-panamboarana. Misy gropy telo ny Antelomita II, manana tanjaka 1.260kw, 1.240 kw ary 1.200 kw. Izany hoe, mitotaly 8,2 kw ny toby any Antelomita.
Simban’ny rivodoza Enawo, ny febroary 2017 teo, ny toerana fitahirizana rano ao amin’ny Antelomita II, ka najanona ny famokarana. Ho vita amin’ny tapaky ny novambra ho avy izao ny asa fanarenana. Nambaran’ny talen’ny fampiasana ny RIA, Randrianjafiarison Soloherizo, fa mandeha tsara avokoa ireo milina ao Antelomita, na efa ho 100 taona aza, ary hain’ny Jirama tsara ny mikojakoja azy ireo.